သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာခေါင်းစဉ်အပေါ်နေခြင်း? ကြည့်ရှုရန်သင်၏ tag cloud ကိုအသုံးပြုပါ Martech Zone
သင့်ရဲ့ဘလော့ဂ်မှာခေါင်းစဉ်အပေါ်နေခြင်း? သင့် tag tag ကိုကြည့်ပါ
စနေနေ့, စက်တင်ဘာလ 2, 2006 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါသည်အခြားဆိုဒ်များကိုလည်ပတ်သည့်အခါသူတို့၏ Tag Cloud ကိုမကြာခဏကြည့်လေ့ရှိသည်။ ငါဘာကြောင့်လဲဆိုတာမသေချာဘူး၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကိုးကားပြီးဒါမှမဟုတ်အဲဒီခေါင်းစဉ်ဒါမှမဟုတ်စာတန်းကငါ့အတွက်စိတ် ၀ င်စားတဲ့အတွက်အဲဒီမှာရောက်နေလို့ပါ။
ဒါပေမယ့်၊ ငါထင်တာကဘလော့ဂါတွေဟာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ် tag tag ကိုဂရုပြုဖို့အရေးကြီးတယ်။ ငါ၏ tag tag ကို sidebar တွင်“ tags” အောက်တွင်တွေ့နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ cloud ကိုးကားချက်များကြောင့်အကြောင်းအရာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်တော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်း, စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနှင့် နည်းပညာကို။ ဒါကကျွန်မဘလော့ဂ်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသိမ်းဆည်းထားချင်တာအမှန်ပဲ၊ ဒါကြောင့်ငါဟာတော်တော်လေးကောင်းသောအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်လို့ထင်တယ်။
Tag cloud (အစဉ်အလာအားဖြင့်အမြင်အာရုံဒီဇိုင်းနယ်ပယ်တွင်တွက်ချက်ထားသည့်စာရင်းဟုလူသိများသည်) သည် website တွင်အသုံးပြုသည့်အကြောင်းအရာ tag များ၏အမြင်အာရုံပုံဖော်ခြင်းဖြစ်သည်။ များသောအားဖြင့်မကြာခဏအသုံးပြုသော tags များသည်ပိုမိုကြီးမားသောစာလုံးများဖြင့်ဖော်ပြခြင်းသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်အလေးထားဖော်ပြခြင်း၊ ပြသထားသည့်အစဉ်သည်ယေဘုယျအားဖြင့်အက္ခရာစဉ်များဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်အက္ခရာအရရောလူကြိုက်များခြင်းဖြင့် tag ကိုရှာဖွေနိုင်သည်။ tag cloud တစ်ခုအတွင်း tag တစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်း tag နှင့်ဆက်စပ်သောအရာများစုဆောင်းခြင်းကို ဦး တည်သွားလိမ့်မည်။ - ဝီကီပီးဒီးယား
သင်၏ tag cloud ကိုဂရုပြုပါ၊ ၎င်းသည်သင်အကြောင်းအရာပေါ်တွင်သင်ရှိနေသည်ဖြစ်စေမရှိသည်ကိုကြည့်ရှုရန်အချက်အလက်များကိုသင့်အားပေးလိမ့်မည်။ ဤ tag cloud များ၏အချို့ကိုကြည့်ပြီးထိုဆိုဒ်များတွင်ပါဝင်မှုရှိ၊ မရှိကိုကြည့်ပါ။
ငါ မှလွဲ၍ အခြားအောင်မြင်သောဘလော့ဂ်များဥပမာအချို့ရှိသည်။ Tag Cloud ကိုဘလော့ဂ်၏အဓိပ္ပါယ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ၎င်းတို့အကြားစုံလင်သောအချိုးအစားရှိသည်။ မင်းရဲ့ tag cloud က blog ည့်သည်ကိုသင့်ဘလော့ဂ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုသဘောမျိုးရှိသလဲဆိုတာမပေးဘူးဆိုရင်မင်းရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုချိန်ညှိသင့်တယ်။
ကျွန်ုပ်၏ဘလော့သည်အခြားဘလော့ဂ်အားလုံး၏ ၉၉.၈၆% ထက် ပို၍ ကောင်းပါသည်။
2:2006 pm တွင်စက်တင်ဘာ 10, 41 မှာ
အလွန်ကောင်းသည့် post - ကျွန်ုပ်၏ tag cloud ကိုကြည့်ခြင်း၊ အရာအားလုံးနေရာတကျ၌ရှိသည်
14:2006 pm မှာနိုဝင်ဘာ 1, 32
ငါသည်သင်တို့၏ site ပေါ်တွင် click thrus ကနေဆင်းသက်နှင့်ဤဆောင်းပါးသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ဘလော့ဂါအသစ်အနေဖြင့် SEO ရှိရှိသမျှအတွေးအခေါ်များကိုလိုက်မီရန်ခက်ခဲသည်။ ဒီဟာကိုအစာချေဖျက်နိုင်တဲ့ပုံစံအဖြစ်ချုံ့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်နှင့်မှတ်ချက်ကိုချန်ထားခြင်းသည် trackback ကဲ့သို့တူညီမှုရှိမရှိကိုယခုကျွန်တော်တွက်ဆနိုင်ပြီလား။
26:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 22
ဒီဆိုဒ်တွင် tag cloud တစ်ခုထည့်ပြီးပါပြီ။
မေလ 28, 2007 မှာ 10: 03 pm တွင်
အလွန်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်။ သို့သော် Tag Cloud သည် Arcade site တစ်ခုအတွက်အလုပ်လုပ်မည်လား။